CIN Khabar तुइन चुँडालिएको घटना छानबिन समितिले दार्चुलामा के गर्दैछ ?
तुइन चुँडालिएको घटना छानबिन समितिले दार्चुलामा के गर्दैछ ? ब्याँस घटना छानवीन टोली घटनास्थलबाट फर्कियो, एसएसबीका अधिकारी पनि टोलीसँगै, विप्‍लव माओवादीको प्रदर्शन
सन्तोष कोट्टारी शुक्रबार, साउन २२, २०७८, १०:५३:००
दार्चुला । दार्चुलाको ब्याँस घटनाको अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालयद्धारा गठित छानबिन समिति घटनास्थलबाट फर्किएको छ । भारतको बाटो भएर छानबिन समिति संयोजक जनार्दन शर्मा नेतृत्वको टोली घटनास्थलको भारततिरको भागमा पुगेर फर्किएको हो ।
घटनास्थलको भारतपट्टी स्थलगत रूपमा अवलोकन गरेर टोली फर्किएको समिति सदस्य एवं दार्चुलाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
‘भारततिरको घटनास्थलको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएका छौँ । नेपालतिर पनि जाने तयारी भइरहेको छ, मौसम प्रतिकूल भइरहेको छ ।’ भट्टले भन्नुभयो ।
समिति संयोजक जनार्दन गौतमको टोलीमा समिति सदस्यहरू डीआइजी पुरुषोत्तम कँडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशकुमार श्रेष्ठ, दार्चुलाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीको टोली घटनास्थल पांगला गस्कु पुगेर फर्केको हो ।
छानवीन समितिको साथमा नेपालबाट सशस्त्रको ४४ नम्बर गणका सशस्त्रका एसपी नरेन्द्रबहादु बम, नेपला प्रहरी डीएसपी मनोहरप्रसाद भट्ट, अनुसन्धान अधिकृत पनि सहभागी थिए ।
छानबीन समितिको टोलीसँगै भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का अधिकारीलाई समेत सहभागी गराइएको थियो ।
एसएसबीकै जावनहरुमाथि घटना घटाएको आरोप लागिरहेका बेला एसएसबी डिडिहाटका कमाण्डेन्ट महेन्द्र प्रताप र अन्य दुई जना एसएसबी अधिकारी पनि छानवीन टोलीसंगै घटनास्थल गस्कु पुगेको थियो ।
सञ्चारकर्मीलाई छानबीन समितिको साथमा घटनास्थलसम्म जान नदिइए पनि घटनाको आरोप लागेको एसएसबीकै अधिकारीकै साथमा छानबीन समिति गएको भन्दै स्थानीयस्तरमा आलोचना पनि भएको छ ।
छानबीन समिति सदस्य एवं निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले सहजीकरणका लागि एसएसबीका अधिकारी घटनास्थलमा गएको बताउनुभयो ।
भारतको धार्चुलाबाट गाडीमा गएको टोली करिब २० किलोमिटर अघि तिउतोला भन्ने ठाउँमा सडक अवरुद्ध हुदाँ केही हिडेर गस्कुबाट गाडी झिकाएर गस्कुसम्म गएको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाल तर्फबाट सडक नहुदाँ टोली भारतको बाटो भएर घटनास्थलतर्फ गएको हो ।
भारतीय मिडियाकर्मीहरुलाई घट्नास्थलभन्दा केही तल्लो क्षेत्र तिउतोलाबाट फर्काएको भारतीय पत्रकारहरुले बताएका छन् । छानबीन समिति गएकोे केही समय पश्चात् नेपाली पत्रकारहरुको टोली पनि जान खोजेको थियो तर दोबाटबाट एसएसबीले फर्काएको थियो ।
साउन १५ गते दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका २ मालघाटमा तुईन तर्ने क्रममा भारतीय एसएसबीले तुईन फुकालीदिदाँ स्थानिय युवक जयसिह धामी महाकाली नदीमा वेपत्ता भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताउँदै आएका छन् ।
छानबीन टोली घटनास्थलमा पुग्ने बित्तिक्कै नेपालतर्फबाट स्थानीयको साथमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २२, २०७८, १०:५३:००